ဒေးလီး တယ်လီဂရပ်ဖ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဒေးလီး တယ်လီဂရပ်ဖ် (အင်္ဂလိပ်: The Daily Telegraph, The Telegraph; /ˈtɛlɪɡræf/) သည် ဗြိတိသျှ နေ့စဉ်သတင်းစာဖြစ်၍ လန်ဒန်မြို့၊ တယ်လီဂရပ်ဖ် မီဒီယာအုပ်စုက ဖြန့်ချိကာ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းသာမက နိုင်ငံတကာသို့လည်း ဖြန့်ဖြူးကြသည်။ ဆိုက်ကြီးသတင်းစာအမျိုးအစားဖြစ်၏ ။
၂၉ ဇွန် ၁၈၅၅; ၁၆၆ နှစ် အကြာက (၁၈၅၅-၀၆-29) (Daily Telegraph & Courier အဖြစ်စတင်)
၃၁၇,၈၁၇ (as of ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာ)
အာသာ ဘီ. ဆလေး (Arthur B. Sleigh) က ၁၈၅၅ တွင် The Daily Telegraph & Courier အမည်ဖြင့် စတင်ထုတ်ဝေခဲ့ကာ ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီအာဏာရလာသည့်အခါ ယူကေ၌ တိုင်းစ်သတင်းစာထက်ပို၍ပင် ခိုင်မာယုံကြည်နိုင်သည်ဟု ယူဆသတ်မှတ်ကြလေသည်။ "တယ်လီဂရပ်ဖ်"တွင် အရည်အသွေး အဆင့်မြင့်သည့် သတင်းပညာရပ်/ဆောင်ရွက်မှု ရှိသည်ဟူသော ဂုဏ်ပုဒ်ကို ပိုင်ဆိုင်ကာ ကမ္ဘာပေါ်၌ ကြီးမားခမ်းနားသော ခေါင်းစဉ်များထဲက တစ်ခုဟူ၍လည်း ဖော်ပြလေ့ရှိကြသည်။
သတင်းစာ၏ ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သော "ယခင်၊ ယခု၊ အနာဂတ်" (Was, is, and will be) စာသားသည် ခေါင်းကြီးပိုင်းစာမျက်နှာများတွင် ပါ၍ ၁၈၅၈ ဧပြီ ၁၉ မှစကာ သတင်းစာ၏ ထုတ်ဝေမူတိုင်း၌ ထည့်သွင်းခဲ့ကြလေသည်။ ၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာတွင် စောင်ရေ ၃၆၃,၁၈၃ အထိရှိခဲ့၍ ညီအမသတင်းစာဖြစ်သည့် "The Sunday Telegraph" ကို ၁၉၆၁ မှစတင်ထုတ်ဝေခဲ့၍ ၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာမှစ၍ စောင်ရေ ၂၈၁,၀၂၅ ရှိခဲ့သည်။ ဤနှစ်စောင်ကို သီးခြားစီလည်ပတ်ကြ၍ သတင်းသမား၊ အယ်ဒီတာများမှာလည်း မတူကြပေ။ သို့ရာ၌ တူညီသော အကြောင်းအရာများ ထည့်သွင်းမှုရှိသည်။
"တယ်လီဂရပ်ဖ်"သည် ထင်ရှားကျော်ကြားသော သတင်းဦးများစွာကို တင်ပြသော ပထမဆုံးသတင်းစာ တစ်စောင်ဖြစ်ရာ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ပွားခြင်းများကို တင်ဆက်ဖော်ပြနိုင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ၂၀၀၉ ၌ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းပါလီမန် အမတ်များ၏ အသုံးအဖြုန်းများကို ဖော်ပြခဲ့ရာ၌ လူသိများထင်ရှားလှသည့် နိုင်ငံရေးသမားများနှုတ်ထွက်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီးရယင်းဖော်ပြမှုအတွက် သတင်းစာဆု (The Press Awards) ချီးမြှင့်ခံရသည်။ ၂၀၁၆ တွင်လည်း အင်္ဂလန် ဘောလုံးမန်နေဂျာ ဆမ် အလာဒိုက်စ်ကို ပုန်းလျှိုးစစ်ဆေးမှုများအကြောင်းကိုလည်း ပထမဆုံးရေးသားခဲ့သည့် သတင်းစာဖြစ်သည်။
↑ The Daily Telegraph motto: Was, is, and will be။
↑ Fred McConnell (21 January 2014)။ Tony Gallagher exits as Daily Telegraph editor | Media။ The Guardian။
↑ General Election 2015 explained: Newspapers Archived 22 October 2017 at the Wayback Machine. The Independent, 28 April 2015. Retrieved9December 2016.
↑ The Daily Telegraph - Data - ABC | Audit Bureau of Circulations။
↑ "The UK's 'other paper of record'"၊ BBC News၊ 19 January 2004။
↑ Rajan၊ Amol။ "What does the future hold for the Daily Telegraph?" (in en-GB)၊ 21 December 2016။
↑ "The Daily Telegraph motto: Was, is, and will be"။
↑ ၈.၀ ၈.၁ National newspaper ABCs: Telegraph y-o-y circulation decline slows as bulk sales distortion ends (17 January 2019)။
↑ During 1989, the daily and Sunday papers were merged intoaseven-day operation under Max Hastings's overall control, but then the editorship was split again.[ကိုးကားချက်လိုသည်]
↑ "Clare Hollingworth: British war correspondent dies aged 105"၊ BBC News၊ 10 January 2017။
↑ MPs' expenses: Full list of MPs investigated by The Telegraph။
↑ "Sam Allardyce on the brink of being sacked as England manager after Telegraph investigation"၊ 27 September 2016။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဒေးလီး_တယ်လီဂရပ်ဖ်&oldid=672834" မှ ရယူရန်
၂၁ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၆:၁၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၆:၁၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။